सुपारी निर्यात कि तस्करीको सेटिङ
सुपारीका उत्पादन र उत्पादनलाई असर गर्ने विकृति बढ्दै आएको चित्रण यथार्थ हो । नेपालमा मात्र उत्पादन हुने सुपारीको परिमाण वर्षमा पुग–नपुग ५–६ हजार मे.टन मात्रै रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ, तर झापामा मात्र ९ हजारभन्दा बढी मे.टनको परिमाणमा निर्यातको सिफारिस गरिएको विगतमा देखिन्छ । सुपारी फल्ने भनिएका जिल्ला झापा र मोरङका बगानमा यतिको परिमाणमा सुपारी फल्नु आश्चर्यजनक बताइन्छ, तर पूर्वी क्षेत्रमा वार्षिक करिब १५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने अनुमान छ ।
लालीगुराँस नगरपालिकाको नौसंसारेकी विष्णु सुवेदीको हातका आंैला फुटेर चिराचिरा भएका छन् । हातैभरि घाउको दाग अनि औंलाको काप पाकेका छन् । यो सबै हुनुको कारण विष्णुले चियाबगानमा काम गर्नु हो ।
कहालीलाग्दो वैदेशिक व्यापारघाटा
व्यापारलाई देशको आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा लिने गरिन्छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै गरिबी न्यूनीकरण कार्यमा व्यापारको ठूलो भूमिका रहेको छ । अहिलेको विश्वमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन व्यापारको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा वस्तु तथा सेवा व्यापारको आकार झन्डै २१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा अतिकम विकासशील देशको योगदान भने १ प्रतिशतमा मात्र रहेको छ ।
समृद्धिको यात्रा कता ?
नेपालमा हाल व्यापक रूपमा बोलिने, सुनिने र पढिने शब्द हो— समृद्धि । नेताहरूको भाषणमा, विज्ञ र विद्वान्हरूको लेख तथा छलफलहरूमा र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका रिपोर्टहरूमा दिनहुँजसो समृद्धिका बारेमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।
शिक्षक सरुवाको सकस
मन्थली नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले ६९ जना शिक्षकको अव्यावहारिक ढंगबाट सरुवा गरेको भन्दै बुधबार सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासंघले जिल्ला समन्वय समिति, मन्थली नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, रामेछापमा सरुवा र दरबन्दी मिलानको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण कति सम्भव ?
अहिले बजारमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको चर्चा–परिचर्चा छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विषय प्रवेश गर्नुपूर्व भारतमा रेल सेवाको विरासत बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । भारतमा त्यतिबेलै रेलसेवा सुरु भएको थियो, जतिबेला भारतमा अंग्रेजको जगजगी थियो । भारतीय भूमिमा पदार्पण गरेको पहिलो रेल भने यात्रुवाहक थिएन, मालवाहक थियो । पहिलो पटक सन् १८५१ डिसेम्बर २२ मा गुडेको रेल मालवाहक थियो भने त्यसको दुई वर्षपश्चात् सन् १८५३ मा यात्रुवाहक रेल सञ्चालनमा आएको थियो ।
स्थानीय कर असुलीले निम्त्याएका समस्या
मुलुकमा अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय छन् भने स्थानीय सरकारले आफ्नो एक वर्ष अवधि पूरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । केही समयअघिदेखि भैंसी, कुखुरा, चल्ला, बाख्रामा कर, बिमा रकम पाउन सिफारिस लिँदा कर, बिक्रीका लागि बजारमा ल्याइने डोका, चित्रा तथा भकारीमा कर, जीवित भएको प्रमाण लिन कर, गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर, स्याउका प्रत्येक दानामा करलगायतका विविध शीर्षकमा स्थानीय निकायहरूले सर्वसाधारण जनताबाट कर असुली गरेका समाचारहरू हामीले दिनहुँजसो सुनिरहेका छौं ।
काठमाडौं–दोलखा : लम्बियो यात्रा
काठमाडौंदेखि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटसम्मको दूरी जम्मा १ सय ३३ किलोमिटर छ । ३ वर्षअघिसम्म काठमाडौं–खाडीचौर–चरिकोट सडकमा बसको यात्रा चार घण्टाको हुन्थ्यो, तर अहिले यात्रा समय कम्तीमा ८ घण्टा भएको छ ।
विज्ञान, विश्वास, रोग र उपचार
विभिन्न प्रकारका रोग किन र कसरी लाग्छन् र ती रोगबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने शतप्रतिशत विश्वासिलो सिद्धान्त अहिलेसम्म प्रतिपादन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा विश्वभर विभिन्न सिद्धान्त र पद्धतिबारे दाबी र प्रतिवाद भइरहेका छन् । मूल पद्धतिका रूपमा एलोपेथिक र सहायक पद्धतिका रूपमा परम्परागत पद्धतिहरू रहेका छन् ।